मस्तिष्क मृत्युपछि हुने अंगदानलाई कसरी प्रवर्द्वन गर्ने ? « Mero LifeStyle
मस्तिष्क मृत्युपछि हुने अंगदानलाई कसरी प्रवर्द्वन गर्ने ?
शहीद धर्मभक्त अस्पताललाई अंगदानको सम्पूर्ण जिम्मा दिनु सरकारी निकम्मापन
संसारमा धेरै पहिलादेखि हुँदै आएको अंगदान मस्तिष्क मृत्युपछि हुने अंगदान हो । मुटु, आन्द्रा र प्यानक्रियाज जस्ता अंगहरु केबल मस्तिष्क मृत्युपछि मात्र दान गर्न मिल्छ । नेपालमा मस्तिष्क मृत्युपछि हुने अंगदान सुरु भइसके पनि त्यो अत्यन्तै न्यून छ ।
मस्तिष्क मृत्युपछि हुने अंगदानलाई के कस्ता पक्षले प्रभाव पारिरहेका छन् त ?
३. अंगदान प्रणाली
राज्य धनी भएर मात्र मस्तिष्क मृत्युपछिको अंगदान प्रक्रिया अघि बढ्ने होइन । विश्वका थुप्रै सम्पन्न राष्ट्रहरुमा पनि अंगदानको दर निकै कम छ । युरोेप, अमेरिकाका धनी राष्ट्रहरुमा पनि मृत्युपश्चात हुने अंगदान कम पाइन्छ । जस्तै जर्मनी र बेलायत जस्ता देशमा पनि मृत्युपछि हुने अंगदानको दर सन्तोषजनक छैन् । यद्यपि, यी राष्ट्रहरुले अंगदानलाई बढाउन विभिन्न कदमहरु चालिरहेका छन् ।
मस्तिष्क मृत्युपछि अंगदान गर्दा धर्मले कुनै असर गर्दैन । केही इसाई धर्म मान्ने राष्ट्रहरुमा अंगदान गर्नेको संख्या निकै राम्रो र कुनैमा निकै कम छ । युरोपियन राष्ट्रहरुमा यस्ता खाले अंगदान गर्नेहरुको संख्या वृद्धि गर्नका लागि विभिन्न प्रयास भइरहेका छन् । तर, इरान जस्तो मुस्लिम बाहुल्यता भएको देश जापान र कोरियाजस्ता देशहरुलाई पनि उछिनेर एसियामै उत्कृष्ट बनेको छ । जहाँ मस्तिष्क मृत्युपछि हुने अंगदानको संख्या बढी छ ।
मस्तिष्क मृत्युपछि हुने अंगदान २ प्रकारको प्रणालीबाट हुन्छ । एउटा अप्ट आउट (Opt Out) र अर्को अप्ट इन (Opt In) । अप्ट आउटमा हरेक नागारिकलाई डोनर मानिन्छ, यदि उसले आफू जीवित रहँदै अंगदान नगर्ने घोषणा गरेको छैन भने । अप्ट इन प्रणालीमा भने व्यक्तिले जीवितै अंगदान गर्ने घोषणा गरेको हुनुपर्छ । अप्ट आउट भएका देशहरुमा सम्भावित अंगदाता धेरै हुन्छन् भने अप्ट इन प्रणाली भएका देशमा थोरै । तर, सम्भावित दातालाई वास्तविक डाटामा बदल्नका लागि कानून मात्र बनाएर हुँदैन् । अप्ट इन भएको देश अमेरिकामा अंगदानको दर प्रति दस लाखमा ४० छ । यस्तै, ९५ प्रतिशत भन्दा धेरै सम्भावित अंगदाता भएको स्वीडेन र बेल्जियममा भने अंगदानको दर यो भन्दा निकै कम छ । अप्ट आउटमा अझै कडा किसिमको नियम सिंगापुरमा छ । जहाँ परिवारले स्वीकृति नदिएपनि अंगदाताको अंग निकाल्न सकिन्छ । तर, त्यहाँ वास्तविक अंगदान निकै कम छ । यसबाट के थाहा हुन्छ भने यी सबै कुरामा अंगदानको दर निर्भर गर्दैन । मस्तिष्क मृत्युपछि हुने अंगदानमा स्पेन संसारमै उत्कृष्ट छ । स्पेनिस अनुभवले जनशक्ति, पारदर्शीता, निष्पक्षता जस्ता कुराहरु निकै महत्वपूर्ण रहेको पुष्टि गर्छ ।
जति धेरै जनशक्ति उत्पादन हुन्छ त्यति धेरै अंगदानको सम्भावना रहन्छ । स्पेनले १० वर्षमा ६० हजार भन्दा धेरै जनशक्ति उत्पादन गरेको छ । तालिम प्राप्त डाक्टर, नर्स र ट्रान्सपलान्ट कोअर्डिनेटर जति धेरै हुन्छन् त्यति धेरै अंगदान हुन्छ । त्यही संख्यामा अंगप्रत्यारोपण गरी धेरैको जीवन बचाउन सकिन्छ ।
अंगदान प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ । नेपाल जस्तो देशमा एक–दुई जना प्रभावशाली व्यक्तिको निर्देशनमा काम गरेर नियम र कानूनलाई मिचियो भने अंगदान कम हुन्छ ।
अंगदान प्रक्रियामा निष्पक्षता हुनु जरुरी छ । अंग ग्रहणकर्ताहरुको सूची राख्ने काम एउटा निष्पक्ष संस्थाले गर्नुपर्छ । ठूलो संस्थाहरुको खिचातानीले यो कार्य राम्रो हुन सक्दैन । भक्तपुरको शहीद धर्मभक्त अस्पताललाई अंगदानको सम्पूर्ण जिम्मा दिनु सरकारी निकम्मापन हो । प्रत्यारोपण गर्ने अस्पताललाई यो अंगदाताको अंग कुन बिरामीले पाउने भन्ने जिम्मा दिनु अंग प्रत्यारोपणको आधारभूत सिद्धान्तविपरित हो ।
चिकित्सक प्रवीन जोशीद्धारा लिखित अन्य सामाग्री
#प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सक